Waxaa runtii aad u fudud in la yidhaahdo wax ku muujinaya nin aad daryeesho oo weli, gaar ahaan xidhiidhada muddada dheer halkaas oo aanu qaadan Wiilkaan waxaan la siiyey tahay, waxaan u muuqdaan in aan. Badanaa, maxaa yeelay, in xidhiidh muddo dheer waxaan dareemayaa inaan nahay ee la soo dhaafay baaqyada si cad u jecel sida iyo ilaa xad ah in ay u badan tahay waa run, maxaa yeelay, waxaad tahay raaxo leh lammaanahaaga. Laakiin kasta oo hadda ka dibna waxaa jira in yar oo, wax understated baad u odhan kartaa si ay u muujiyaan aad daryeesho oo aad isaga ka soo xusuusiyo in uu aad u baahan tahay oo keliya sida ugu badan ee uu sameeyey oo dhan waagii hore iyo xataa more sidaas oo kalena haatan.
Qoraalka oo Message A Nice
Haddii uu shaqada, fudud ah “Rajaynaynaa in aad maalin wanaagsan ugu socda” inta lagu guda jiro qado-joojin noqon lahaa hab aad u fiican ah oo muujinaysa jacayl. Waxa ay muujinaysaa in aad ka fekereyso inaad isaga iyo in aad daryeesho. Waa Hubi in aad samaysay isaga ilka.
Salaan Nice On Jidka Out Door The
Oo waxay ku yidhaahdeen wax la mid ah “Maalin wanaagsan” ama “is ogow” marka ay ku jiraan ay ka soo muujin doonaa aad daryeesho. Uma baahnid in aad si dhunkado haddii aan wax aad samayn sidii nabad gelyo Salaan marar aad u badan, in kastoo aan hubiyo in aad la jeclaan lahaa inaan ahay.
Tus Interest An
Wax in dadka jecel in la Wadaage waa qof maqlaa iyaga sababtoo ah in muujinaysaa in aad xiisaynayso sida qof aan iyaga ku jiro. Laakiin inta badan aanu qofku ogayn in qofka ay la tahay in uusan qaadan xiiso iyaga oo danahooda si aan u muujiyo in aad samayn. Just si fudud u hoos gelin wada hadalka aad u fudud. Wax u eg, “show Si aad jeceshahay waa on caawa” muujinaya aadan dhagaysan.
Waxaad dhahdaa Wax Wanaagsan
Xukun waxa aad dhihi on waxa aad u malaynayso inuu iyaga ku faraxsan. Sidaas tusaale ahaan hadii uu ciyaaro gitaarka u sheego waxa uu si fiican u ciyaareyso gaadhay, haddii uu galay fashion u sheego si fiican u egtahay ama haddii uu jecel yahay music u sheego in uu yahay mid aqoon badan oo ku saabsan music. Mararka qaarkood waxaan oo dhan waa kalluumaysiga, waayo, ammaan kisiga.
U sheeg inaad u jeclahay
Dad badan oo lamaane ha odhan marar aad u badan marka ay raaxo leh qofka. In hab jacaylka waa cad waxaa iyo malaha ma u baahan tahay in la sheegay in mar kasta laakiin hadda kasta iyo mar kale iyaga xasuusiso in aad samayn.
11 Top Facebook Pages Talada Dating In 2015
WHO ayaa sheegtey in aadan soo dhaqso karaa Love?
Macnaha Kiss ah